Dalxiisayaasha ayaa tareenka ku xaniban 13 saacadood
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Dalxiisayaasha ayaa tareenka ku xaniban 13 saacadood
Rakaabka ayaa ciil qaba ka dib markii lagu qasbay inay ku sugnaadaan tareenka dalxiis ee Indian Pacific qiyaastii 13 saacadood halka uu ku xayirnaa laba kiilomitir meel ka baxsan Broken Hill.
Qiyaastii 200 oo qof ayaa saarnaa tareenka, waxayna sugayeen in shaqada laga dhammaystiro waddooyinka tareenka ee Broken Hill, oo ku taal galbeedka New South Wales.
Rakaabka ayaa sheegay inay dareemeen inay xanniban yihiin oo shaqaaluhu iska indhatireen ka dib markii tareenku istaagay abbaare 3:00 pm (AEST) safarkiisa Perth ilaa Sydney ee uu marayo Adelaide.
Mid ka mid ah ayaa yidhi: “Looma ogolaanin inaanu ka degno tareenka inaanu lugaha kala bixinno.
"Dadka sigaarka caba looma oggolaan inay cabaan ama wax kale, ma oggolaan karaan inay albaabadu furmaan, waxa kaliya ee ay na siiyeen wuxuu ahaa shaah iyo kafee bilaash ah lix saac kadib."
'Waxaa nala haystaa'
Rakaabka caalamiga ah, oo uu kujiro dalxiisayaasha New Zealand Stuart, ayaa sheegay in aysan mar dambe tareen ku raaci doonin Australia.
"Waxaan ku xirnayn tareenka gudihiisa loomana ogolaan inaan baxno, cudurdaarna naloogu sheegayo inaan isku waxyeeleyno hadii aan ka degno tareenka," ayuu yiri.
Waxaan ku iri, waa nala haystaa, aad baanna ugu xanaaqay iyaga, waxna kama qaban doonaan.
Dalxiis Ingiriis ah John ayaa sheegay in khibradiisii ​​ugu horreysay ee safarka tareenka Australia uu ahaa mid jahwareer iyo musiibo ah.
"Waxaan waayey xiriir, waxaan gabadhayda ku hayaa magaalada dhiiga leh ee Sydney oo i sugaysa… dhamaan qorshayaasheenii ciidaha ayaa burburay," ayuu yiri.
Waxaan ku soo wada wareegnay adduunka dhiigu ku daadanayo. Tani waxay ahayd inay noqoto mid kamid ah safarada waa weyn. Safar qaar ka mid ah tani waxay noqotay. ”
Afhayeenka Great Southern Railways Tony Braxton-Smith ayaa sheegay in rakaabku ay heli doonaan lacag celin buuxda isla markaana lagu dhiirigalinayo inay markale shirkada la safraan.
"Tani sida cad maahan nooca khibradda aan rabno inaan bixinno," ayuu yiri.
34kii sano ee ay shaqeyneysay Badweynta Baasifigga waligeed wax sidan oo kale ah horay ugama dhicin.
Waxaan siin doonnaa dib u soo celin buuxda oo ah inta ay ku safraan, waxaana ka codsan doonaa inay na siiyaan fursad aan mar kale ku soo laabano, marka waxaan siin doonaa foojarka boqolkiiba 50 waqtiga soo socda iyo warqad raali gelin ah. ”